Blue skies scenery SLC
fanontaniana Blue skies scenery SLC
1 taona 5 volana lasa izay #1109 by AppleJuice
Manantena aho fa hisy olona mety hanampy ahy amin'izany. Nahita ny lanitra manga teny manodidina an'i Salt Lake City aho. Ity seranam-piaramanidina ity dia manidina aho ary mivoaka matetika ao amin'ilay simulator ary tena te-hisintona ilay toerana misy zavatra aho. Tsy afaka nahita aho raha misintona ny rakitra na izany aza, mandefa ahy amin'ny tranonkala iray izany. Raha misy manana hevitra manondro ahy ny toerana tokony hahafahako misintona azy, na raha tsy afaka misintona azy aho dia hankasitraka be.
1 taona 5 volana lasa izay #1116 by DRCW
Miarahaba ny fampiasana ny tranokala miresaka sy ny tontolonao!
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: AppleJuice
1 taona 5 volana lasa izay #1117 by denpic
Raha tsy izany dia manandrana izany